MaSARM 101: Yako Ekupedzisira maSARM Nhungamiro
Isu takaunganidza zvese zvaunoda kuti uzive nezveSARMS. Muchirongwa ichi cheSARM, iwe unozosvika pakunzwisisa kuti ndeapi maSARM, hunhu uye kuchengetedzeka kwemaSARM, kana maSARM aine mhedzisiro. Isu tinovharawo maSARM akanakisa evatangi, maSARM akanakisa ekucheka, kupi kutenga maSARM, uye nezvimwe.
Verenga pamusoro peyakazara maSARM gwara.
Inosarudza Androgen Receptor Modulators, kana maSARM, rudzi rwekurapa remubatanidzwa. MaSARM anonzi ane mhando imwechete yemhedzisiro se uyerogenic zvinodhaka (senge steroids). Nekudaro, ivo vanofanirwa kuve vanonyanya kusarudza mukuita kwavo. 'Kusarudzika' kwavo ndosaka vachionekwa sevanobatsira, vakachengeteka kushandisa uye vasimuka mukuzivikanwa.
MaSARM akatanga kugadzirirwa kubatsira kubata mamiriro senge kufutisa, bone, uye kuparara kwemhasuru kunokonzerwa nekukwegura uye chirwere (senge kenza). Asi, munguva pfupi yapfuura, maSARM akagamuchirwa nevatambi uye nharaunda yekuvaka muviri. Ivo vanoonekwa sekuchengetedzeka kwekushandisa pane steroid uye vakanzi vanogadzira zvishoma zvishoma pasina mhedzisiro.
Ndeupi musiyano uripo pakati peSARM nemaPeptides?
Kuti unzwisise musiyano uripo pakati peSARM nema peptides, zvakakosha kuti utange wanzwisisa kuti mapeptidi ndeapi.
Chii chinonzi peptides?
Peptides ndiwo chaiwo mhando yekuvaka muviri yekuwedzera iyo ine isingasviki makumi mashanu amino acids. Peptides zvakare inogadzira mashoma emhedzisiro pane steroid (yakafanana nemaSARM) uye haina yakananga anabolic mhedzisiro. Ivo anoshandiswa kuwedzera kuyerera kwekukura kwehomoni.
Kufanana pakati peSARM uye peptides
MaSARM uye peptides vese vanozivikanwa kuve nemhedzisiro mhedzisiro pane steroids
Zvese zviri pamutemo kutenga pasi pemamwe mamiriro
Ose ari maviri marudzi emasuru-anovaka vamiririri
Imwe neimwe ine isina kunangana anabolic mhedzisiro pamhasuru nemapfupa
Musiyano uripo pakati peSARM uye peptides
MaSARM akagadzirwa, nepo ma peptides anogona kunge ari echisikigo kana ekugadzira
MaSARM rudzi rweyerogen ligand-receptor nepo polypeptides cheni ine amino acids isingasviki makumi mashanu
MaSARM anosunga kune iyo androgen receptor mumhasuru nemapfupa kuti vawedzere kukura kwavo apo Peptides inowedzera kuburitswa kwehormone yekukura
MaSARM anogadzira yakasarudzika mhedzisiro pane bone uye mhasuru chivakwa nepo kusarudzwa kwema peptides kuri kwakaderera
MaSARM Akachengeteka Here?
Izvo zvakakosha kana uchifunga nezvekushandisa kwemaSARM kuenderera nekungwarira. Indasitiri yeSARM parizvino haina kudzorwa, saka kune zvakawanda zvakaderera-mhando (uye kunyange zvisiri zvemanyepo) zvigadzirwa kunze uko mumusika.
Kune akasiyana maSARM akasiyana anowanikwa, uye mamwe anoonekwa seakachengeteka kupfuura mamwe. Yazvino nguva, zvidzidzo zvezesayenzi uye nhoroondo dzevanhu dzakavaratidza kuti dzakachengeteka kupfuura vanabolic steroid.
Gara uine chokwadi chekuti urikutenga maSARM kubva kumutengesi zviri pamutemo uyo ane yechitatu-bato ongororo, saka unoziva kuti uri kutenga maSARM chaiwo. Zvatinounganidza zvakakwirira uye zvakagadzirwa muUK nemishonga-giredhi zvigadzirwa. Unogona ongorora kuunganidzwa kwedu pano.
MaSARM Ari Pamutemo here?
MuUK kutengesa kweSARM zviri pamutemo. Zvisinei, nzira iyo maSARM anotengeswa anorambidzwa zvichienderana nechinangwa chemugadziri, mutengesi, uye mutengi.
MaSARM Anoshanda Sei?
MaSAR anoshanda zvakafanana neanabolic steroid, ndosaka achionekwa seimwe sarudzo kune steroid, ine yakadzikira uyerogenic zvivakwa.
MaSARM anonyatso kurudzira iwo anogamuchira uyerogen mumhasuru nemaseru emapfupa — achikurumidza kukura nepo achikanganisa zvishoma mamwe maseru mumuviri (kusiyana nesteroids). Ivo "vanosarudza" chete mamwe mhasuru uye pfupa tishu, vachisiya zvimwe zvikamu zvakaita sechiropa, prostate, uye huropi zvisina kubatika.
Inoshanda sei maSARM? Vanoshanda here?
MaSARM anozivikanwa kuve akapfava, asi anoshanda kwazvo. Mhedzisiro mhedzisiro inogadzirwa zvinoenderana nerudzi rweSARM yakatorwa. Semuenzaniso, Ostarine inoonekwa seimwe yeSARM dzakanakisa kutanga kutora.
Kubudirira kweSARM kunoenderanawo nezvinangwa zvemuviri. Kana zvibodzwa zviri kupisa mafuta uye kuvaka mhasuru, SARM senge Ostarine inoshanda mukubatsira vashandisi kuwana chero kupi kubva pa4 kusvika gumi mapaundi mune angangoita gumi nemaviri mavhiki.
MaSARM Ane Mhedzisiro?
Mhedzisiro yemhedzisiro yeSARMs idiki kwazvo kune hapana. Mazhinji maSARM, Ostarine inosanganisirwa, haina-methylated saka haizokanganisa chiropa.
Mimwe yemhedzisiro yakataurwa kuve kuneta uye kuneta, kunyange zvichinzi pasi peyero yakakurudzirwa mikana yekusangana nemhedzisiro iyi yakanyanya kuderera.
Ichokwadi ndechekuti maSARM angave matsva, tsvagurudzo haina kukwanisa kuratidza zvakadaro mhedzisiro yenguva refu yekushandisa maSARM, kunyange hazvo pakutanga akagadzirwa kuti ape imwe nzira ine hungwaru kune anabolic steroids.
Kunyangwe kana kwete mushandisi anoona mhedzisiro zvinoenderana nesimba reSARM, semuenzaniso, SARM yakasimba inogona kuva nenjodzi yakakwira yemhedzisiro. Mimwe yemhedzisiro inogadziriswa inosanganisira:
Kuderedza muhuwandu hwehurume uye huwandu hwe testosterone
Ganda rine mafuta nebvudzi
Chinja mumazinga echolesterol
Chinja mu libido
Psychological kupindwa muropa
Zvimwe zvakataurwa zvisingagadzirisike mhedzisiro yeSARM inotorwa mune yakakwira doses inosanganisira:
Kuwedzera kenza njodzi (ine maSARM akasarudzwa)
MaSARM Akakosha here?
Kunyangwe kana kwete maSARM akakosha zvinoenderana nenyaya chaiyo yemushandisi. Mamwe maSARM ari nani kutema mafuta, mamwe ari nani kuburitsa kumusoro. Kune vamwe, maSARM anobatsira kwazvo mukudzivirira kuparara kwemhasuru nekuvandudza hutano hwese hwamathambo. Izvo zvese zvinoenderana nekuti chii chinangwa chekupedzisira kushandisa maSARM.
Ndeapi maSARM andinofanira kutora?
Rudzi rweSARM iwe rwaunotora pamwe nesheck yaunotora (kana iripo) zvakanyanya zvinoenderana nekuti muviri wemunhu unopindura sei maSARM uye nezvinangwa zvavo zvemuviri. Heano akanakisa marudzi emaSARM ezvinangwa zvinotevera zvakasiyana:
MaSARM akanakisa eVatangi
Aya anotevera ndiwo anodiwa maSARM evatangi uye zvakare vakadzi vachitsvaga yakaderera dosi:
Iwe unogona kuwana mubatanidzwa weaya 'anotanga' MaSAR mumatumba pano.
MaSARM akanakisa ekucheka
Vazhinji vashandisi veSARM vanofunga kuti vanonyanya kubatsira pakucheka nekuti ivo vanobatsira muviri kuchengetedza mhasuru isina kusimba pasina kuwedzera kuchengetwa kwemvura. Heano akanakisa maSARM ekucheka:
MaSARM akanakisa eBulking
Heano mamwe emaSARM akanakisa ekubhururuka uye mhasuru kuwana:
Yakanakisa maSARM Stack
Kune akatiwandei marudzi emaSARM masheya ekusarudza kubva. Heano mamwe akanakisa:
Kutanga Kucheka Stack
Kutanga Muscle Stack
Zvepakati Kucheka Stack
Zvepakati Musuru Stack
Yepamberi Shredding Stack
Yepamberi Musuru Stack
Kudya kwako pane maSARM
Mhedzisiro iwe yaunosangana nayo neSARM stack ichave yakakura kwazvo kana ukabatanidzwa nechikafu chakakodzera. Kutora maSARM wega haugone kupa muviri wauri kutsvaga kana usiri kudya chikafu chakakodzera kana kurovedza muviri.
Iko kiyi nemaSARM ndeyekuwedzera mapuroteni mukudya kwako. MaSARM anoisa muviri wako mune yakawanda yeanabolic state, nekudaro, muviri wako unozokwanisa kuwedzera protein synthesis. Izvo zvakajairwa kurudziro ndeye kuwedzeredza yako yenguva dzose protein protein yekudya.
MaSAR anowanzove ane anti-estrogen mhedzisiro. Kuti urwise izvi, zvakakosha kuti uwedzere mimwe miriwo kuchikafu chako, kunyanya iyo inorwisa anti-estrogen mhedzisiro sehowa. Iko kune zvakare zvinongedzo uye mhando dzechikafu chaunofanirwa kudzivirira zvachose, senge:
Yakaporeswa nyama ine yakawandisa nitrate
Chikafu chakabikwa / chakarohwa
Zvigadzirwa zvakagadziriswa zvine zvigadzirwa zvekugadzira uye mahydrogenated maoiri
Vakadzi vanofarira kutora maSARM nekuda kwezvikonzero zvakafanana sevarume: kuwedzera simba uye simba, kupisa mafuta, uye kuwana mutete mushe. MaSARM achapawo vakadzi kuwedzera kwakanaka kwesimba rese.
Vakadzi vanogona kushandisa maSARM, zvisinei, zvakakosha kuti uzive kuti vakadzi vanowanzo kukanganiswa zvakanyanya nemhedzisiro kupfuura varume. Acne, kuwedzera bvudzi kukura, kuchinja libido, kusanduka kwemamiriro ekunze, uye kudzika kwezwi zvimwe zvezvinhu zvinogona kusangana nevanhukadzi, saka zvakakosha kusarudza nemazvo maSARM ekutora nekutarisa mhedzisiro. Izvo zvakare zvakakosha kuti vanhukadzi vanamatire kune post-kutenderera kurapwa kana ivo vapfuura nemuSARMs kutenderera.
Vakadzi vanotora maSARM vanogona zvakare kuona mhedzisiro nekukurumidza. Kunatsiridza kunogona kutanga kuitika mune mashoma senge 1-2 mavhiki. Heano marudzi eSARM anokurudzirwa vakadzi:
MaSARM muyero wevakadzi
Vakadzi vachazoda kutora yakaderera dosi kupfuura avo vevamwe varume. Muyero chaiwo unoenderana nekuti SARM iri kutorwa nei. Semuenzaniso, neOstarine, varume vangangoda kutanga ne20 mg pazuva uye pamwe vanoshanda nzira yavo kusvika ku30 mg. Nekudaro, kune vakadzi, muyero unongoda kuve ungangoita gumi mg zuva rega rega uye kuwedzera kubva ipapo zvichienderana nezvakabuda.
Ingo rangarira kuti kana zvasvika kumaSARM, mhedzisiro uye kuyerwa kwakasiyana kune wega munhu, uye kwete vakadzi chete. Izvo zvakakosha kutanga nezvidiki zvidiki, tarisa mhedzisiro, uye kugadzirisa kubva ipapo.
MaSARM isarudzo yakanaka kune vakadzi vanotarisira kuwedzera simba ravo uye mhasuru sezvavanowanzo nzwa mhedzisiro nekukurumidza. Mamwe ma prohormones uye steroids anogona kuva akaomarara pamuviri uye zvichizoguma nematanho akakwirisa emhedzisiro muvakadzi. MaSARM anopa vakadzi mukana wekutaurisa mhasuru yavo vasina kubhururuka zvakanyanya. Ivo vanoita yakakwana yemusiyano kuve nemhedzisiro kumuviri panguva zvakare iri yakapfava. Uyezve, vakadzi havafanirwe kubata neyakaomarara yakaipa mhedzisiro yevanabolic steroid.
Post-Cycle Therapy mushure mekutora maSARM
Post-kutenderera kurapa (PCT) inguva pfupi yapfuura mushure mekupedza kutenderera kwemaSARM uko mushandisi achifanira kudzosera iwo mahormone mazinga kune akajairwa nhanho kuburikidza nekubatanidzwa kwemishonga, chikafu, uye mamwe makomponi. Funga nezvemashure-kutenderera kurapwa senzira yekumutsiridza muviri.
Iko hakuna kuenzana-saizi-inokodzera-ese post-kutenderera kurapa kosi. Zvichienderana nemunhu, mhando yeSARM yakatorwa, uye kureba kweSARM kutenderera nguva, iyo PCT kosi inogona kuitirwa zvinhu zvakasiyana. Izvo zvese zvinoenderana nechirwere.
Vashandisi vanofanirwa kuronga yavo PCT pamberi, kazhinji kusvika kumagumo eSARMs kutenderera kuti vaone zvakajairika kuchengeterwa kwehomoni kwakadzikama.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti nekuti maSARM ane mashoma kune asina mhedzisiro uye pane mashoma mashoma anokanganisa maitiro ekuti post-kutenderera kurapa haina kukosha sezvazvingaite neakawanda echinyakare vanabolic steroid.
Mamwe maSARM asina kusimba anotorwa panguva pfupi, saAndarine, anogona kusada kurapwa kwepashure zvachose, nepo mhando yakasimba yeSARM yakatorwa kwenguva yakati wandei yemwedzi ingangoda nguva dzese kurapwa kwepashure.
Kwokutenga maSARM? Pano paSARMs Chitoro UK hongu
Kunge chero chinhu chiri pamusika, zvakakosha kuti utore pakati peiyo yepamusoro maSARM uye yakaderera-mhando maSARM anobva kunzvimbo dzinofungidzirwa. Kunyanya, kana iyo SARM yakapihwa yakachipa kwazvo kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvinowanikwa pamusika saka zvinogona kunge zvisiri kusimudzirwa kune epamusoro ekugadzira uye ekugadzira zviyero. Heano mamwe emhando dzematambudziko nemaSARM asina kugadzirwa zvemhando yepamusoro uye yechitatu-bato yakasimbiswa:
Kuwedzera chepfu nemakemikari anokuvadza mumaSARM
Kuderedza maSARM nezvinhu zvisina hutano
Kufungidzira mutemo kune purofiti yakakura
Kucheka makona panguva yekugadzira kuchengetedza pamitengo
Izvo zvakakosha kuti utarise kuti chigadzirwa cheSARM chave chechitatu bato rakasimbiswa kuziva kana chiri chigadzirwa chemhando yepamusoro.
KuSARMs Chitoro kuUK, tinotengesa emhando yepamusoro maSARM uye zvekuwedzera izvo zvakachengeteka, zviri pamutemo, uye zvinogadzira zvabuda. MaSARM edu anogadzirwa muUK kune epamusoro mhando zviyero uye vachishandisa mishonga giredhi zvigadzirwa. Izvi zvinoreva kuti vashandisi vanogona kushandisa zvakachengetedzeka maSARM kukura mhasuru uye kurasikirwa nemafuta.